Allgedo.com » Ra’isal Wasaaraha Soomaaliya Oo Kulamo La Qaatay Madaxweynaha South Africa Iyo Wasiirka Arimaha Dibada Ee Imaaratka Carabta (Sawiro)
Home » News » Ra’isal Wasaaraha Soomaaliya Oo Kulamo La Qaatay Madaxweynaha South Africa Iyo Wasiirka Arimaha Dibada Ee Imaaratka Carabta (Sawiro) Print here| By: allgedo.com:
Jawaabaha waa la xiray Muqdisho, 27,Sept, 2012: Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Dr.Cabdiweli Maxamed Cali iyo wasiirkiisa arimaha Dibada Cabdulahi Xaaji ayaa kulamo kula qaatay Xarunta Qaramada Midoobay ee magaalada New York madax kala duwan iyagoona ka wada hadlay arimaha soomaaliya iyo isbadalda siyaasadeed ee ugu danbeeyey oo dalka ka dhacay.
Ra’iisul wasaaraha ayaa kulan uu la qaatay wasiirka Arimaha Dibada ee isu taga Imaraatka Carabta. Sheikh Abdullahi Bin Zayed Al Nahyaan ayaa soo dhaweeyeye marxalada cusub ee ay gashay Soomaaliya wuxuuna balan qaaday in dowalda isutaga Imaaraatka Carabtu ay kordhin doonto taageeradii ay siin jirtay Soomaaliya siina wadi doonto xariirkii ka dhaxeeyey labada dal.
Sidoo kale Ra’iisul wasaaraha ayaa kulan saacado badan qaatay la yeeshay madaxweynaha South Africa Jacob Sumu wuxuuna Ra’iisul wasaaruhu ka warbixiyey xariirka siyaasadeed oo bilowga ah ee ka dhaxeeya labada dowladood isagoona ku aamanay dowlada South Africa gacantii ay ka gaystay Abaartii ku dhufatay dalka sanadkii la soo dhaafay.
Madaxweynaha South Africa Jacob Sumu ayaa sheegay in Soomaaliya iyo South Africa uu ka dhexeeyey xariir walaaltinimo isla markaan uu balan qaadayo in dalkiisu ka taageerayo Soomaaliya dhanka nabad galyada, sara u qaadida iyo tayeeynta hay’adaha Dowlada.
Dhanka kale Ra’iisul wasaaruhu wuxuu kulan la qaatay Xooghaya Arimha Dibada ee Maraykanak Arimaha Africa Jonnia Carson wuxuuna sheegay inuu aad ugu faraxsanyahay horumarka dhanka siyaasada ee Soomaaliya wuxuuna hambalyo u diray Madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud.
Ugu danbayntii Ra’iisul wasaaruhu wuxuu kula la qaatay madaxweyne ku xigeenka JaziiradaSychelles iyagoona ka wada hadalay arimaha burcad badeedka oo dhibtaato ba’an ku haya labada dal iyo mustaqbalka sida laga yeelayo maxaabiista faraha badan ee ku eedaysan burcad badeednimada oo ku jira xabsiyada Jasiirada Sychelles.